Ukwenza Malvertising: Kusho Ukuthini Ngomkhankaso Wakho Wokukhangisa Ngedijithali? | Martech Zone
Unyaka olandelayo kubhekwe ukuthi ube unyaka othokozisayo wokukhangisa nge-digital, nezinguquko ezingenakubalwa zokuphayona kubuso be-inthanethi. I-Intanethi Yezinto kanye nokuya kokungokoqobo okubonakalayo kubanga amandla amasha wokumaketha ku-inthanethi, futhi izinto ezintsha ezintsha kwisoftware zihlala zisesimweni esiphakathi nendawo. Ngeshwa, noma kunjalo, akuyona yonke le ntuthuko enhle.
Labo bethu abasebenza ku-inthanethi bahlala bebhekana nengozi yezigebengu ze-cyber, ezithola ngokungakhathali izindlela ezintsha zokungena kumakhompyutha ethu futhi zidale umonakalo. Abaduni basebenzisa i-inthanethi ukwenza ukwebiwa kobunikazi futhi benze i-malware eyandayo. Okunye ukuphindwaphindwa kwe-malware, njenge-ransomware, manje sekwazi ukukhiya yonke ikhompyutha yakho - inhlekelele uma unezinsuku zokugcina ezibalulekile nemininingwane ebalulekile lapho. Ekugcineni, amathuba okuba nalezi zinkinga adala ukulahleka okukhulu kwezezimali noma avale izinkampani ngokuphelele manje aphezulu kunanini ngaphambili.
Njengoba kunezinsongo ezinkulu kangaka ezicashe ekujuleni kwewebhu, kungaba lula ukushalazela ukutheleleka okubonakala kungenangozi, njengocezu lokukhwabanisa - akunjalo? Akulungile. Ngisho nezinhlobo ezilula ze-malware zingaba nomthelela omubi emkhankasweni wakho wokumaketha wedijithali, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uzazi kahle zonke izingozi namakhambi.
Ukwenza kabi - noma ukukhangisa okunonya - kuhle kakhulu umqondo ozichazayo. Kuthatha isimo sesikhangiso esijwayelekile se-inthanethi kepha, lapho uchofozwa, ukuyisa esizindeni esinegciwane. Lokhu kungaholela ekonakaleni kwamafayela noma nokudunwa kwemishini yakho.
Umbono we-2009 ukutheleleka kuwebhusayithi ye-NY Times zilande kumakhompyutha ezivakashi bese zakha okwaziwa ngokuthi yi-'Bahama botnet '; inethiwekhi yemishini esetshenziselwa ukwenza inkohliso enkulu online.
Yize abaningi bekholelwa ukuthi ukukhangisa okungekho emthethweni kusobala ngokwanele ukuthi ungakubona - njengoba kuhlala kuthatha isimo sama-pop-ups ama-porn noma ama-imeyili okuthengisa angaphandle kwezwe - iqiniso ukuthi abaduni abanonya baya ngokuya baba nobuqili.
Namuhla, basebenzisa iziteshi zokukhangisa ezisemthethweni futhi benza izikhangiso ezikholekayo kangangokuba imvamisa isiza asazi nokuthi sinegciwane. Eqinisweni, izigebengu ze-cyber manje seziyiphayona emsebenzini wazo kangangokuba zize zifundele nokusebenza kwengqondo yabantu ukuthola indlela engcono yokukhohlisa izisulu nokungena ngaphansi kwe-radar.
Lokhu kuthuthukiswa ngeshwa kusho ukuthi umkhankaso wakho wokumaketha ngokwedijithali kungenzeka ukuthi uphethe igciwane njengamanje, ngaphandle kokuthi wena uqaphele. Faka lokhu ngeso lengqondo:
Inkampani ebonakala isemthethweni iza kuwe ibuze ukuthi ingafaka isikhangiso kuwebhusayithi yakho. Banikela ngenkokhelo enhle futhi awunasizathu sokubasola, ngakho-ke uyakwamukela. Ongakuqapheli, ukuthi lesi sikhangiso sithumela inani lezivakashi zakho esizindeni esinegciwane futhi siziphoqa ukuthi zithole igciwane lingaqapheli. Bazokwazi ukuthi ikhompyutha yabo ithelelekile, kepha abanye ngeke baze basole ukuthi inkinga iqalwe ngesikhangiso sakho, okusho ukuthi iwebhusayithi yakho izoqhubeka nokuthelela abantu kuze kube yilapho othile efaka ifulegi ngenkinga.
Lesi akusona isimo ofuna ukuba kuso.
Ukuhlanekezelwa kuvuliwe indlela ebheke phezulu ecacile selokhu yabonwa okokuqala ngo-2007 lapho ukuba sengozini kwe-Adobe Flash Player kuvumela abaduni ukuba bambe amathe abo kumasayithi afana neMyspace neRhapsody. Kodwa-ke, kube khona amaphuzu ambalwa abalulekile esikhathini sokuphila kwawo angasisiza ukuthi siqonde ukuthi yathuthuka kanjani.
Ngo-2010, i-Online Trust Alliance yathola ukuthi amasayithi angama-3500 ayephethe lolu hlobo lwe-Malware. Ngemuva kwalokho, iqembu lezimboni ezahlukahlukene lakhiwa ukuzama ukulwa nosongo.
Ngo-2013 wabona uYahoo ehlaselwa ngumkhankaso omangazayo wokukhwabanisa owaletha enye yezindlela zokuqala ze -hlengware eshiwo ngenhla.
ICyphort, inkampani ehola phambili yezokuphepha, ithi ukuthi ukungaziphathi kahle kubone ukukhuphuka komhlathi kukhuphuka ngamaphesenti angama-325 ngonyaka ka-2014.
Ngo-2015, lokhu kuphazamiseka kwekhompyutha okukhungathekileyo kwahamba ngeselula, njengoba uMcAfee ekhonjwe ku umbiko waminyaka yonke.
Namuhla, ukukhangisa kabi kuyingxenye yokuphila kwedijithali njengokuzikhangisa uqobo. Okusho ukuthi, njengomakethi oku-inthanethi, kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukuzazisa ngobungozi obulandelayo.
Ibeka Kanjani Usongo?
Ngeshwa, njengomthengisi futhi umsebenzisi wekhompyutha, usongo lwakho ekuqhamukiseni kabi lumbili. Okokuqala, udinga ukuqinisekisa ukuthi akukho zikhangiso ezithelelekile eziya emkhankasweni wakho wokumaketha. Imvamisa, ukukhangisa okuvela eceleni ungumshayeli osemqoka wezezimali ngemuva kokuphakanyiswa okuku-inthanethi futhi, kumuntu onentshisekelo ngomsebenzi wakhe, lokhu kusho ukuthola ababhida kakhulu ukugcwalisa isikhangiso ngasinye.
Ngenxa yalokhu, kubalulekile ukuthi wazi izingozi zokunikeza izikhala zezikhangiso usebenzisa ukubhida kwesikhathi sangempela; lolu cwaningo inikeza ukubukeka okuningiliziwe kwenkinga engaba khona ngaleli qhinga lokwenza imali online. Ngamafuphi, ithi ukuqhudelana ngesikhathi sangempela -ukufaka endalini kuzikhangiso zakho - kuza nengozi eyengeziwe. Kugqamisa ukuthi lokhu kungenxa yokuthi izikhangiso ezithengiwe zisingathwa kumaseva wezinkampani zangaphandle, kucishe kuqede noma yikuphi ukulawula ongaba nakho kokuqukethwe kwakho.
Ngokufanayo, njengomthengisi oku-inthanethi, kubalulekile ukuthi ugweme ukuthola igciwane ngokwakho. Noma ngabe ubukhona obuhlanzekile obucwebayo ku-inthanethi, izindlela zokuphepha zomuntu onobudlabha kungenzeka zikwenze ulahlekelwe yidatha yomsebenzi obalulekile. Noma nini lapho nixoxa ngokuphepha kwe-inthanethi, okubaluleke kakhulu okumele kube yimikhuba yenu. Sizofaka ukuthi singakuphatha kanjani lokhu ngokuqhubekayo kokuthunyelwe.
Malvertising & Idumela
Lapho bexoxa ngosongo olungahle lube khona lokumangalela kabi, abaningi bayehluleka ukuqonda ukuthi kungani kubaluleke kangaka-- impela ungamane ususe isikhangiso esinegciwane, bese inkinga ingasekho?
Ngeshwa, lokhu akuhlali kunjalo. Abasebenzisi be-Intanethi baguquguquka ngendlela emangalisayo futhi, njengoba usongo lwama-hacks luya ngokugqama kakhulu, bazokwenza konke okusemandleni abo ukugwema ukuba yizisulu. Lokhu kusho ukuthi kulokho esingakubiza ngokuthi 'isimo esihle kakhulu' - okusho ukuthi, okuvelayo okusobala ukuthi okunobungozi kuvela futhi kususwe ngaphambi kokuba kuthole ithuba lokudala noma yimuphi umonakalo - kusenamathuba okuthi umkhankaso wakho wokumaketha ungagcotshwa ngendlela engalungiseki.
Isithunzi esiku-inthanethi siya ngokuya sibaluleka, futhi abasebenzisi bafuna ukwazi ukuzizwa sengathi bayayazi futhi bayayithemba imikhiqizo abanikela ngayo imali yabo. Ngisho nesibonakaliso esincane senkinga engaba khona futhi bazothola kwenye indawo abazotshala khona isikhathi nemali yabo.
I-mantra yanoma yimuphi unjiniyela wezokuphepha omuhle ithi: 'Ukuphepha akuwona umkhiqizo, kodwa inqubo.' Kungaphezu kokuklama i-cryptography eqinile ohlelweni; yakhela uhlelo lonke ukuze zonke izindlela zokuphepha, kufaka phakathi i-cryptography, zisebenze ngokubambisana. UBruce Schneier, Ohola i-Cryptographer kanye nochwepheshe wokuphepha kwamakhompyutha
Ngenkathi i-cryptography ngokukhethekile izokwenza okuncane ukubhekana nokungahambi kahle, imizwa isasebenza. Akunakwenzeka ukusetha uhlelo oluzolokhu luhlinzeka ngokuvikelwa okuphelele. Noma usebenzisa ubuchwepheshe obuhle kakhulu, kusenemikhonyovu ekhomba umsebenzisi kunalokho ikhompyutha. Empeleni, okudingayo yikho izivumelwano zokuphepha, ezibuyekezwa futhi zibuyekezwe njalo, esikhundleni sohlelo olulodwa.
Lezi zinyathelo ezilandelayo zibaluleke kakhulu ukukusiza ekubhekaneni nenkinga ekhula njalo yokuphambanisa.
ukufaka i-Comprehensive Security Suite. Kunamaphakheji amaningi okuphepha atholakalayo. Lezi zinhlelo zizohlinzeka ngokuhlolwa njalo emshinini wakho futhi zinikeze umugqa wokuqala wokuzivikela uma uthola igciwane.
Chofoza smart. Uma usebenza njalo online, ukuchofoza zonke izixhumanisi zesikhangiso ozitholayo akuhlakaniphile. Namathela kumasayithi athembekile futhi uzonciphisa kakhulu ingozi yokutheleleka.
Qalisa i-Ad-Blocker. Ukuqalisa i-ad-block kuzonciphisa inani lokukhangisa olibonayo ngakho-ke, kuzokuvimbela ekuchofeni kokuthelelekile. Kodwa-ke, njengoba lezi zinhlelo zibhekela kuphela izikhangiso ezingathandeki, ezinye zisengangena. Ngokufanayo, inani elikhulayo lezizinda livimbela ukusetshenziswa kwe-ad-block ngenkathi ufinyelela kuzo.
Khubaza i-Flash ne-Java. Inani elikhulu le-malware lilethwa kukhompyutha yokugcina ngama-plug-ins. Ukuzisusa nakho kususa ubungozi babo.
Ukuvikela Umkhankaso Wakho Wedijithali ekungakhanjisweni kahle
Faka i-plug-in ye-antivirus. Ikakhulukazi uma usebenzisa isiza se-WordPress ukumaketha, kukhona ama-plug-ins amaningi ngaphandle lapho okungahlinzeka ngokuvikelwa kwama-anti-virus.
Veta ngokucophelela izikhangiso ezisingathiwe. Ngokusebenzisa ingqondo ejwayelekile, kungaba lula ukubona uma izikhangiso ezivela eceleni zinomthunzi omncane. Ungesabi ukuwavala ngokuqapha uma ungaqiniseki.
Vikela iphaneli yakho yomlawuli. Noma ngabe imithombo yezokuxhumana, iwebhusayithi yakho noma ama-imeyili akho, uma isigebengu singangena kunoma yimaphi ama-akhawunti, kuzobalula ukuthi zifake ikhodi enonya. Ukugcina amaphasiwedi wakho eyinkimbinkimbi futhi evikelekile kungenye yezindlela zakho ezinhle zokuzivikela kulokhu.
Ukuphepha okukude. Kukhona nengozi enkulu yokuthi abenzi be-cybercriminals bathole ukufinyelela kuma-akhawunti akho ngamanethiwekhi e-WiFi omphakathi angaphephile. Usebenzisa i-Virtual Private Network (VPN) lapho iphuma futhi izobethela idatha yakho ngokwakha ukuxhumana kokuqala okuphephile phakathi kwakho neseva ye-VPN.
Ukwenza kabi kungukucasula okukhungathekisayo kubo bonke abathengisi abaku-inthanethi; eyodwa ebukeka ingayi ndawo noma kunini kungekudala. Yize singeke sazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni nge-malware, indlela engcono kakhulu yokuhlala phambili kubaduni ukuqhubeka nokwabelana ngezindaba zethu nezeluleko nabanye abasebenzisi be-intanethi.
Uma uke waba nokuhlangenwe nakho ngokungahambi kahle noma ezinye izinto zokuphepha kokumaketha kwedijithali, qiniseka ukuthi ushiya amazwana ngezansi! Imibono yakho izosiza kakhulu ekwakheni ikusasa le-inthanethi eliphephe kakhudlwana labakhangisi nabasebenzisi ngokufanayo.